Izikolo eziBalaseleyo zoBunjineli ze5 eTexas ngeeScholarships 2022
I-Texas likhaya lezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli emhlabeni, eli nqaku libonelela ngeenkcukacha ezipheleleyo kwezona zikolo zi-5 zibalaseleyo zobunjineli eTexas kunye nokufundiswa kwisikolo ngasinye esibonelela ngako.
Zeziphi ezona zixeko zidumileyo zinezikolo zobunjineli eTexas?
Iikhosi zeNjineli eziDumileyo
Izikolo ezili-XNUMX eziphezulu zezoBunjineli eTexas.
Izikolo eziphezulu ze-5 zobunjineli eTexas kunye neScholarship
IYunivesithi yaseTexas eAustin
Isikhululo seKholeji iA & M saseTexas
IYunivesithi yaseTexas eDallas
Iinkcukacha kwiZikolo ezi-5 eziBalaseleyo zobunjineli eTexas neeScholarships
IYunivesithi yase-Texas ye-A & M
I-Texas likhaya kwezinye ze Izikolo zobunjineli ezilungileyo kakhulu kwihlabathi, Eli nqaku libonelela ngeenkcukacha ezipheleleyo kwizikolo ezi-5 zobunjineli zaseTexas kunye nengxowa-mali yokufunda nganye yesikolo.
Ubunjineli sisiseko esiphambili sempumelelo yomntu ngenxa yeli sebe lezenzululwazi okuninzi okuye kwafezekiswa, uninzi lwegalelo elihle lenziwe kwaye uninzi lweempendulo lufunyenwe.
Ngenxa yokubaluleka kolu qeqesho, ibe yindawo enkulu yokufunda phantse kuyo yonke iyunivesithi kunye neekholeji kwaye uninzi lwabafundi lunqwenela ukuba ziinjineli ezizeleyo ukuze nabo babe negalelo ngayo nayiphi na indlela.
Ubunjineli kukusetyenziswa kwemigaqo yenzululwazi ukuyila nokwakha oomatshini, izakhiwo kunye nezinye izinto ezininzi ezibandakanya kodwa ezingaphelelanga kwiitonela, iindlela, izithuthi nakwizakhiwo. Ubunjineli bubona ukuba oovimba bendalo baguqulwa baba ziindlela eziluncedo eluntwini.
Iinjineli zilandela ukulandelelana ekusombululeni iingxaki, ukulandelelana okunjalo kunokubandakanya ukucwangcisa, ukuphuhlisa, ukuvavanya, ukufakela kunye nokugcina oomatshini abohlukeneyo baveliswa kukusebenza nzima kunye nemigaqo.
Kukho intsomi ngokubanzi yokuba zonke iinjineli ziingcali zezibalo ezithi zibangele amandla abo okucinga ngomatshini ezingqondweni zabo kwaye bawuzise kwiziqhamo.
Izikolo zobunjineli eTexas zininzi kwaye zanele ukuba kuthi xa ujonga eyunivesithi ukufaka isicelo, kungcono wenze uphando olunzulu malunga nezo zinempawu kunye nobuchule obufunekayo ukuze umntu afaneleke njengomntu oqeqeshiweyo kwicandelo lobuNjineli. . Uninzi lwezi kholeji ziingcali kuphando kunye nezinto ezintsha ezibalaseleyo.
Ezona zixeko zidumileyo zinezikolo zobunjineli zibandakanya iSan Antonio, iHouston, iDallas, iAustin ne-El Paso.
Ngale mini, zininzi izinto zobunjineli apho umntu anokuthi abaluleke kakhulu. Ezinye iidigri zobunjineli zihlawula ngaphezulu kunabanye ngenxa yokufumana inzuzo kunye nemfuno ethandwayo.
Inani elilungileyo kubo kubandakanya ubunjineli bekhompyuter, ubunjineli bepetroleum, ubunjineli baselwandle, ubunjineli bearospace, ubunjineli bemichiza, ubunjineli boomatshini, ubunjineli bobuNjineli nezinye izinto ezininzi zobunjineli.
Kukho iiyunivesithi ezizezona zilungileyo kwezinye iinkalo zobunjineli ezinje ngeekhompyuter kunye nobunjineli boomatshini kunye nombane, into elungileyo sinazo izinto ezihlaziyiweyo ezinokukunceda wazi ezona zikolo zibalaseleyo ezibonelela ngezi nkalo zobunjineli;
I-9 zeeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada
I-13 yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi
I-15 yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi
KwiKholeji yaseWesile eseMazantsi
KwiYunivesithi yaseNorthern Texas
Izikolo ezilishumi ezidweliswe apha ngasentla zenza uluhlu olubanzi lwezikolo ezilishumi zobunjineli eTexas kodwa ngenxa yokuthe ngqo, sithathe isigqibo sokushwankathela eli nqaku kwizikolo ezihlanu eziphambili; zidweliswe apha ngezantsi.
Le yunivesithi yabucala ephakathi ngobungakanani eTexas. Ihleli kanye kwiziko lesixeko saseHouston kwiziko elinemithi engamahektare angama-300 kufutshane neziko lezonyango laseTexas kunye neSithili seMyuziyam saseHouston. Yikholeji yobunjineli yeminyaka emine eseHouston, eTexas.
Isikolo sinezinga lokumkela malunga ne-11%. Izifundo zabafundi zimalunga ne- $ 23,202 kodwa abafundi abangakwaziyo ukujongana nayo kwaye abakulungeleyo ukufumana isifundiswa banokuzimasa. Imali yesicelo yi- $ 75 kwaye ihlala iphela ngoJanuwari 1 ngonyaka.
Abafundi abanomdla bayacetyiswa ukuba bafake izicelo kwangoko ngokwaneleyo ithuba elingcono lokungeniswa esikolweni. Ixabiso lokumkela yi-11%. Isikolo samkela isicelo esiqhelekileyo minyaka le kwaye i-69% yabafundi ifumana uncedo lwemali / isibonelelo / isifundi minyaka le. Umndilili woncedo opheleleyo onikezelwa minyaka le $ 39,956 kunye ne-93% yabafundi bayavuma ukuba oonjingalwazi babeka iinzame zokufundisa abafundi babo ngempumelelo.
Ukwamkelwa nakweyiphi na injineli enkulu kwiYunivesithi yeRis, amanqaku asisiseko eSat afunekayo aphakathi kwe-1450-1560. I-100% yabantu abatsha bahlala kwiKhampasi. Yintoni eyahlula esi sikolo kwezinye izikolo zobunjineli eTexas yimizekelo yazo eyahlukileyo yezifundo kunye nokufunda.
Iiklasi zityhala abafundi kwaye bacela umngeni kuso nasiphi na isimo sengqondo sokungabikho esikolweni. Abafundi kunye noonjingalwazi basebenzisana ngokufanayo kwaye beza nezinto eziluncedo ekuqhubeleni phambili kwabantu. Ireyithi yokuthweswa izidanga yi-95% kunye ne-92% yabafundi bafumana ingqesho kwisithuba seminyaka emibini yokuthweswa isidanga.
Iinkcukacha zeyunivesithi yaseRiski;
IYunivesithi yaseRis iphelise iingxaki zemfundo ngokunika uluhlu olubanzi lonyaka ukufundiswa kwabafundi ukuba bafake izicelo kwaye bafezekise imisebenzi yabo eRice ngaphandle kokukhathazeka malunga nemali njengoko isifundi siya kuyinyamekela yonke inkxaso mali.
Izifundo zivulelekile kubafundi bamanye amazwe kunye nabasekhaya nakweliphi na icandelo lokufunda kuwo onke amanqanaba okufunda abafundi abatsha Ngubani onokufumana izibonelelo zokufunda ngokusekwe kwintsebenzo yabo ebalaseleyo yokufunda, ikwabizwa ngokuba sisiseko esisekwe kwimfundo efanelekileyo.
Le yeyona yunivesithi ibalaseleyo kwezobunjineli ezingama-25 eMelika, iyenza ukuba ibengowesibini kwiTexas. Ibekwe eAustin Texas. Iyunivesithi ibonelela phantse ngazo zonke izixhobo ezifunekayo kwinkqubela phambili yesikolo, intuthuzelo kunye nokusetyenziswa okuphezulu kwabafundi.
Sisikolo esikhulu esimalunga nama-38,097 ababhalisileyo kwisidanga sokuqala. Ukwamkelwa kwabafundi esikolweni kukhuphisana ngokufanelekileyo njengoko isikolo sinenqanaba lokwamkelwa kwe-39%. Abaphumeleleyo kwiYunivesithi bayaqhubeka emva koko ukufumana umvuzo wokuqala malunga ne- $ 46,000 emva kwezifundo zabo.
IYunivesithi yaseTexas eAustin ikwaziwa ngokuba inomdla wobomi babafundi, ikwindawo yesibhozo kuma-668 kwiiyunivesithi zikarhulumente eMelika. Imali yesicelo yi- $ 75 kwaye umhla wokugqibela wesicelo minyaka le ngu-Disemba 1.
Amanqaku e-SAT aqala nge-1230-1480 ayimfuneko ukuze angeniswe kwisikolo esidumileyo, ngelixa uluhlu lomthetho lungu-27-33.
Ibhodi yeDyunivesithi iyaqonda ukuba inani elilungileyo labafundi alinakho ukubhatala imali yokufunda kunye nezinye iifizi ngokufanelekileyo, ke inani elilungileyo labafundi malunga ne-65% bahlala kwizibonelelo zokufunda nakwezemali. Iyunivesithi ikwindawo yokuqala kwiiyunivesithi zikarhulumente eTexas.
IYunivesithi yaseTexas, iiAustin Scholarship Details;
Ukuvumela abafundi abavela kwimvelaphi yonke bonwabele imfundo ekumgangatho wehlabathi kwiYunivesithi yaseTexas, uthotho lwe izibonelelo zemfundo zibonelelwa rhoqo ngonyaka kubafundi besidanga sokuqala nokuba ungowasekhaya okanye owamazwe aphesheya unokufaka isicelo sale mfundo.
Isifundi siya kuhamba indlela ende yokuxhasa yonke okanye isiqingatha semirhumo yokufunda.
Le yunivesithi kawonkewonke ekumgangatho ophezulu kwiKholeji yaseTexas, iyunivesithi enkulu kakhulu, inabhaliso olungaphezulu kwama-47,399. Ngokusisiseko sesinye sezona zikolo zibalaseleyo eTexas nakwihlabathi elijikelezileyo.
Sisikolo esikhuphisanayo nenqanaba lokwamkelwa malunga ne-68% kwaye ngoku sivele njengenombolo yesibini njengeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu eTexas. Isicelo sihlala sisisi-Disemba 1 kwaye umrhumo wesicelo uyi- $ 75, kuyacetyiswa ukuba abafundi abaza kuthumela isicelo kwangoko ngokwaneleyo ukuze babe nokuma ithuba.
Enye yeemfuno ezisisiseko zokwamkelwa esikolweni linqaku le-SAT elisusela kwi-1170-1380 kunye ne-ACT amanqaku ngokukhetha ama-25-31.
I-76% yabafundi ifumana uncedo lwezezimali eyunivesithi kwaye ngonyaka malunga ne- $ 9,597 ichithwa kwizibonelelo, kwizifundi nakwizemali. I-A & M yaseTexas ime phakathi kwezinye izikolo eTexas kwipesenti yabafundi abanikwa uncedo ukuze bakwazi ukufumana imfundo esemgangathweni abayifunayo kodwa banyanzelekile. Abafundi banikwe ithuba lokuphanda ngamandla kwaye bazise izimvo zabo kwinyani.
Iinkcukacha zeeScholarship ze-A & M zaseTexas;
Esi sikolo sinesebe elikhethekileyo elisingatha bonke abafundi izifundi kunye nenkxaso mali. Kukho izifundiswa ezahlukeneyo abafundi basekhaya nakwamanye amazwe abanokufaka izicelo zazo kodwa ezi nkxaso-mali zisekwe kwimfundo yomfundi, ekufuneka ibalasele, kunye nabafundi abanemicimbi yezemali.
Ezinye zeengxowa-mali zixhaswa ngemali kwaye zixhaswa ngemali kodwa nayiphi na into oyinikwayo iya kunceda kwinkxaso-mali yakho yemfundo kwaye ibonelelwa ngonyaka.
Le yiyunivesithi yamaKrestu. Kuluhlu lwesithathu lweeYunivesithi zamaKristu ezilungileyo eMelika. Iyunivesithi ekumgangatho ophezulu ebekwe kwiDyunivesithi yePaki kwiDallas Fort Worth Area.
Inokubhekiswa kuyo njengeyunivesithi ekumgangatho ophakathi malunga ne-6,273. Ukwamkelwa kwabafundi esikolweni kukhuphiswano oluncinci njengoko bafumana izicelo ezininzi. Abalumni baseMethodist baseMazantsi baya kumvuzo wokuqala we- $ 54,300. Umhla wokugqibela wesicelo nguJanuwari 15 kunye nomrhumo wesicelo se- $ 60.
Amanqanaba eSAT afunekayo ukusuka kwi-1280-1460 kunye nomgangatho we-ACT malunga ne-29-33. I-77% yabafundi ifumana uncedo lwemali minyaka le kwaye i-avareji yoncedo lwezezimali olunikezelwa minyaka le lumalunga okanye kwezinye iimeko ngaphezulu kwe- $ 7,535. Umlinganiso weFakhalthi yomfundi yi-11: 1 kwaye isikolo siqhuba iinkqubo zesidanga sangokuhlwa.
Ngokophando lwakutsha nje, i-89% yabafundi iyavumelana noluvo lokuba oonjingalwazi babeke iinzame ezininzi ekufundiseni iiklasi zabo. Enye ipesenti elungileyo yabafundi iyavuma ukuba kulula ukufumana iiklasi abazifunayo kwaye kulula kakhulu ukulawula umthwalo.
Izinto ezintle malunga nale yunivesithi kukuba inkqubo yeYunivesithi ilunge kakhulu, sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eTexas kunye nokufunda nangona kungabanini babucala. Isimo sabo sengqondo ekusebenzeni nzima kunye nokomelela sibaluleke kakhulu kwaye nangaphandle kwemfundo esemgangathweni, abafundi bayakhekile kwaye baphathwa ngokukodwa, umntu ngamnye kubuchule bakhe.
Iinkcukacha zeScholarship Methodist kwiYunivesithi yaseZantsi;
I-SMU ibonelela ngemfundo esemagqabini kwaye ifuna wonke umntu ophupha ngokuya phaya ukuba abe yinxalenye yayo yiyo loo nto isikolo sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ukufundiswa kwabafundi basekhaya nakwamanye amazwe, kuwo onke amanqanaba okufunda, ukufaka isicelo, ukufumana inkxaso-mali kunye nokufumana imfundo ekumgangatho wehlabathi ebafaneleyo.
Iingxowa-mali zinikezelwa rhoqo ngonyaka kubafundi abanemfundo ebalaseleyo kunye nezinye izinto ezifanelekileyo ezenziwa sisikolo.
Esi sesithathu kuluhlu lweeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu eMelika. Ikalwe kakhulu kulo lonke elaseMelika nangaphaya kwaye ndikwindawo eyiRichardson, eTexas kwiDallas-Fort Worth Area.
Liziko elikhulu elinabantu ababalelwa kwi-16,691 yabafundi abasaqhuba kakuhle. Ukwamkelwa kwabafundi kukhuphiswano; banenqanaba lokwamkelwa le-69% kwaye abafundi babo be-alumni kuthiwa baya kumvuzo wokuqala we- $ 44,000. Kwiikholeji ezili-132, ngama-63rd Iikholeji ezinkulu kakhulu eMelika.
Inomhla wokugqibela wesicelo ngoDisemba ngentlawulo yesicelo se- $ 50. Uluhlu lwamanqaku e-ACT ngama-25-32 ngelixa amanqaku amanqaku e-SAT eyi-1220-1440 kunye nokudluliselwa, kufuneka isikolo se-CGPA esiphakamileyo. Ipesenti yabantu abafumana inkxaso-mali imalunga neepesenti ezingama-77 zabafundi abanesidanga esiyi- $ 14,566.
Ngaphezulu kwe-75% yabafundi bayavuma ukuba ooNjingalwazi babeka konke okusemandleni abo ekufundiseni iiklasi zabo ngokwenza njalo babenakho ukuwenza umthwalo wabo ngokukhuselekileyo. Isikolo sisikolo esigqwesileyo, balungiselela abafundi ukuba bacele umngeni kwaye babancede bajongane nobomi ngokuthe gabalala kokubini kwizifundo nakwilizwe labo. Yesihlanu kuludwe lwezona zikolo zi-5 zibalaseleyo kwezobunjineli eTexas ngezifundo.
IYunivesithi yaseTexas, iDallas Scholarship Details;
UT Dallas ubonelela Inkxaso mali yonyaka kubafundi abanenjongo yokufunda apho, isifundi sinokufumana inkxaso-mali ngokupheleleyo okanye inkxaso-mali ethembekileyo kodwa baya kunceda ukulungiselela abafundi imfundo. Oku kuthetha ukuba uyakufunda kwi-UT Dallas ngaphandle kokukhathazeka ngemicimbi yakho yezemali.
Inkxaso mali yokufunda iyafumaneka kwisicelo kubo bobabini abafundi bamanye amazwe nabasekhaya abanqwenela ukufunda apho.
Apho uneenkcukacha ezipheleleyo kwizikolo ezi-5 eziphambili zobunjineli eTexas ngolwazi lwabo lokufunda.
Qalisa ikhosi yakho yobunjineli ngayo nayiphi na kwezi I-15 yeyona yunivesithi ibalaseleyo yobunjineli kwihlabathi ezi zikolo zamkelwe kwilizwe liphela kwaye ziqinisekile ukubumba amandla akho kwimisebenzi yobunjineli ephumeleleyo.
Izikolo eziBalaseleyo zobunjineli eTexasIzikolo ezilungileyo zobunjineli eTexas kunye neScholarshipIzikolo zobunjineli ezicetyiswayo eTexasIzikolo zobunjineli eziphezulu eTexas
Post Previous:Izibonelelo ezi-6 zokufumana uMcebisi weKholeji wokufumana uVavanyo loKwamkelwa
Okulandelayo Post:Iinkqubo ezili-10 eziPhambili eziFundisiweyo zeFD kunye neZicelo zoQhagamshelo
Juni 2, 2020 kwi-8: 07 pm